Nepali Rajneeti | ‘लाज पनि लजाएर भुतुक्कै होला !’
बैसाख १७, २०७८ शुक्रबार २४३ पटक हेरिएको
राजनीतिमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा इमानदारी हो । विचार र सिद्धान्त हो । तर त्यही हराएपछि कसको के लाग्छ ? राजनीतिमा इमान हराएपछि के हुन्छ ? जे नहुनुपर्ने हो त्यही हुन्छ ।
गण्डकी प्रदेशमा बिहीबार राजिव गुरुङ(दीपक मनाङे)ले युवा तथा खेलकुद मन्त्रीको शपथ लए । संकटोन्मुख गण्डकी सरकारका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरूङले मनाङेलाई सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका हुन् ।
संसद्‌मा अविश्वास प्रस्ताव आएको बेला मन्त्री गुरुङले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका हुन्। नेपाली काँग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले अविश्वास प्रस्ताव ल्याएका ल्याएका छन् ।
अविश्वास प्रस्तावमा बुधवार नै मतदान हुने कार्यसूची थियो । तर, राजनीतिक भाग दौडले अन्तिम समयमा आएर त्यो रोकियो । खासमा जनमोर्चाका एक सांसद नाटकीय ढङ्गले सम्पर्कविहीन भएपछि बुधवार को मतदान रोकिएको थियो ।
कुनै समय ‘गुन्डा नाइके’का रुपमासमेत चिनिएका मनाङे मन्त्री बनेपछि राजनीतिक वृत्तमा एउटा बहस छेडिएको छ । उसो त उनी माननीय बन्दै पनि यस खालका बहस नभएका होइनन् । उनी अपराध कर्ममा जेलसमेत बसिसकेका व्यक्ति हुन् । २०६० सालमै उनी धारिलो हतियार प्रयोग गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका थिए ।
०६० पुसमा चक्रे मिलनलाई धारिलो हतियार प्रहार गरेको अभियोगमा उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । उनलाई सरकारले ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा चलाएको थियो । काठमाडौँ जिल्ला अदालतले २०६१ सालमा मनाङेलाई २ वर्ष जेल सजायको आदेश गर्‍यो ।
जिल्लाको फैसलामा चित्त नबुझेपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा सरकारका तर्फबाट पुनरावेदन गर्‍यो । पुनरावेदन अदालत पाटनले २०६९ सालमा जिल्ला अदालतको फैसला बदल्दै मनाङेलाई ५ वर्ष कैद सजाय हुने आदेश गरेको थियो ।
त्यसपछि उनी ०६५ साल फागुन र ०७० साल फागुनमा पक्राउ परे। यति मात्रै होइन उनीमाथि धनमाल डाँका मुद्दा, सार्वजनिक अपराध, गोली हानेर हत्या प्रयास, अवैध सम्पत्ति, सङ्गठित अपराध, सार्वजनिक अपराधलगायत कयौँ मुद्दा उनीमाथि लागे ।
उनी महानगरीय प्रहरी वृत्त लैनचौर, हनुमान ढोका परिसर, टेकु परिसरसँगै काठमाडौँका धेरै प्रहरी कार्यालयका थुनामा बसिसकेका छन् । अब उनी मन्त्री भइसके ।
नवनियुक्त मन्त्री मनाङे जहिल्यै चर्चामा आइरहने व्यक्ति हुन् । विगतमा उनको गुण्डागर्दी देखि संसदीय निर्वाचन हुँदै सपथ ग्रहणदेखि मन्त्री बन्दासम्मका धेरै किस्सा छन् । कर्तव्य ज्यान मुद्दा टुंगो नलागेको भन्दै उनलाई सुरुमा सपथ नै गराइएन । १ वर्षपछि सपथ लिएका मनाङे संसदको अर्थ विकास समितिको सदस्य बने ।
समितिले राम्रो काम नगरेको आरोप लगाएर राजीनामा दिए । उनले सार्वजनिक ठाउँमा एन्फा कास्की अध्यक्ष मिलन गुरुङलाई हिर्काए । मिलनले मुद्दा हालेपछि उनी केही समय हिरासत समेत बसे । उनै मनाङे अहिले मन्त्री बनेका छन् । २०५०-५१ देखि नै उनी आपराधिक गतिविधिमा संलग्न थिए । पटक पटक पक्राउ पर्ने र छुट्ने उनको दिनचर्या जस्तै थियो ।
उनलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा मुद्दा समेत चलाएको थियो । उनले त्यहाँबाट भने सफाइ पाए । पर्यटन व्यवसाय, ठेक्का पट्टा हुँदै उनी राजनीतिमा निरन्तर लागिरहे ।
नेपालमा पछिल्लो समय विचार, सिद्धान्त र आदर्शको राजनीति एकादेशको कथाजस्तै भइसक्यो । कर्णालीमा नेकपा एमालेको ह्विप उल्लङ्घन गरेर माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिने तीन जनाले मन्त्री उपहार पाएको धेरै भएको छैन ।
उनीहरूको सांसद पद गए पनि अहिले मन्त्री छन् । सांसद नभएको अवस्थामा उनीहरू कर्णाली सरकारका ‘६ महिने जागिरे’ छन् । सरकार जोगाउन सङ्कटमा साथ दिएका एमालेका तीन जनालाई मुख्यमन्त्री शाहीले मन्त्री उपहार दिए ।
सङ्कटमा साथ दिनेलाई मन्त्री उपहार दिने कर्णालीका मुख्यमन्त्री मात्रै होइनन् । यो त नेपाली राजनीतिको पर्याय जस्तै भइसक्यो । लुम्बिनीमा बिहान अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका जसपाका चार सांसद पनि साँझ मन्त्री भएका थिए । उनीहरूको पनि सांसद पद गयो । ६ महिने जागिरेका रूपमा लुम्बिनी सरकारमा मन्त्री छन् ।
यही अवस्था प्रदेश १ मा पनि छ । केन्द्रमा त झन् सांसदै नभएका ६ जना मन्त्री छन् । माओवादी त्यागेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिने ६ जनालाई ओलीले मन्त्री उपहार दिएका छन् । जसमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापासहित, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, मणि थापालगायत छन् ।
भन्नलाई राजनीति सम्भावनाको खेल पनि भन्छन् नेताहरू । यहाँ जे पनि सम्भव छ । जे पनि हुन्छ । भइरहेको छ । तर, जतिसुकै सम्भावनाको खेल भए पनि न्यूनतम इमान त हुनुपर्ने । होइन भने त विचार र सिद्धान्तका नाममा कयौँ पार्टी किन चाहियो ।
एउटै दोकान खोलेर बसे भइगो । नीतिहरूको राज नै राजनीति हो । तर हामीकहाँ कहिल्यै पनि इमान,जमान र नीतिमा चल्न सकेन । नेपालमा पछिल्लो समय देखिएका राजनीतिक गतिविधिले आम मानिसमा राजनीतिप्रति वितृष्णा उत्पन्न भएको छ । नेताहरूले लाज पचाएपछि जनताले लजाउनुपर्ने अवस्था छ । केटिएम दैनिक